Taylor Lopes ツ Blog – kọmputa & ozi Technology
A ihe ịga nke ọma ihe nlereanya nke alaka Git
Maara otú iji Git bụ mkpa, na nke a na-agụnye ịnọgide na-enwe a collaborative development gburugburu ebe obibi gh software.
25 August 2017 Taylor Lopes	alaka, ịzụlite, git, ukwu, jikọrọ ọnụ, model, ntọhapụ	1 comment
Wụnye mPDF na-enweghị Computer na sava ahụ – PDF akụkọ na PHP
The mPDF site PDF si CSS / HTML na ala mmụta usoro. Echiche dị ebe a bụ ime ka mPDF rụọ ọrụ na-enweghị ịwụnye onye dere ya na ihe nkesa. A ga-eji onye dere ya mee ihe na mpaghara ma ziga ya na sava ahụ ka emesịa.
18 August 2017 Taylor Lopes	andiwet, mpdf, PHP, akụkọ	1 comment
10 August 2017 Taylor Lopes	ihere, andiwet, expressive, los / basepath, middleware, PHP, ọha na eze, zend, zend-expressive	1 comment
CTRL + C e CTRL + V entre Windows e VM Linux dịghị Virtual Box
Ka Copy / Tapawa n'etiti Windows Desktop na Debian virtualized? Ihe doro anya ngwọta ga-wụnye “ọbịa ose” ime Iha VM VirtualBox, ma ihe banyere mgbe ọ na site na njehie “Okpu melite ọrụ vboxadd”?
28 July 2017 Taylor Lopes	Ọzọ ka ọbịa, ctrl + c, ctrl + v, gcc, vboxadd, vboxlinuxadditions, virtual igbe, vm, windo	9 comments
akpaka chịkọtara ịzọpụta typescript na Visual Studio Code
Na nke a post anyị ga-edozi nsogbu abụọ: 1) iwu “tsc” Ọ na-adịghị ghọtara na integrated ọnụ VS koodu, e 2) chịkọtara-adịghị arụ ọrụ na-akpaghị aka mgbe na-azọpụta faịlụ “.TS” (pịnye akwukwọ).
14 July 2017 Taylor Lopes	angular.js, node.js, TS, tsc, typescript, visual studio koodu, vs koodu	Nkume a comment
28 March 2017 Taylor Lopes	PHP asambodo, udomo oro, PHP, ule, zcpe, zend, zend gbaara PHP engineer	16 comments
28 January 2017 Taylor Lopes	egwu, Asus, akwa, ddns, dns-o-matic, dnsomatic, dyndns, freedns, modem, Nat, ọ dịghị-ip, rawụta, technicolor	4 comments
11 December 2016 Taylor Lopes	dịkwuo disk, abawanye ohere, gparted, hd, modifyhd, Ubuntu, VB, vboxmanage, vdi, virtualbox, vm	21 comments
WordPress: wepu directory URL ideghari iwu site .htaccess
Olee otú ozugbo nweta a directory na mgbọrọgwụ nke server mba WordPress na-ahazi na-arụ ọrụ dị ka a friendly URL?
7 December 2016 Taylor Lopes	htaccess, htdocs, ideghari, url friendly, Wampserver, wordPress, www, Xampp	Nkume a comment
Wụnye ma ọ bụ na-emelite Java na Ubuntu
Ị chọrọ iji wụnye Java na omenala na n'enweghị na na Ubuntu 4 nzọụkwụ? A bụ ihe a ngwa ngwa ụzọ ime nke a na-enweghị iji atọ ndị ọzọ repositories.
19 November 2016 Taylor Lopes	update, wụnye, Java, Linux, Ubuntu, update	Nkume a comment
Olee otú iji nweta gị Zend PHP Asambodo A nkenke ma umeala n'ihi otú m mere na-Zend Certified PHP Engineer - ZCPE. Introdução A ideia não é falar sobre as vantagens (ma ọ bụ) inwe asambodo. Achọrọ m ịkọrọ ahụmịhe m, nke nwere ike inye aka ....
Copyright © 2022 taylorlopes.com ebe Oct 2012, 3.110.710 ohere